ခနောက်စိမ်း သန့်စင်စက်ရုံများ အနံ့ဆိုး ထွက်ရှိနေသည် ဟုဆိုကာ ပြောင်းရွှေ့ ပိတ်သိမ်းပေးရေးေ?? - Yangon Media Group
ခနောက်စိမ်း သန့်စင်စက်ရုံများ အနံ့ဆိုး ထွက်ရှိနေသည် ဟုဆိုကာ ပြောင်းရွှေ့ ပိတ်သိမ်းပေးရေးေ??
မွန်ပြည်နယ် မော်လမြိုင်မြို့နယ် ညောင်ပင်ဆိပ်ရပ်ကွက် မော်လမြိုင်စက်မှုဇုန်ရှိ ခနောက် စိမ်းစက်ရုံမှ အနံ့ဆိုးထွက်သည်ဆိုသည့် ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ စက်မှုဇုန်ဝန်းကျင်နေ ဒေသခံ ပြည်သူအင်အား ၂ဝဝ ကျော်က ခနောက်စိမ်းစက်ရုံများ ပြောင်းရွှေ့ပိတ်သိမ်း ရေး ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုကို ဇူလိုင် ၂၂ ရက် နံနက် ၁ဝ နာရီက ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
”အနံ့ဆိုးထွက်လို့ ပြည်သူတွေကို ထိခိုက်ခံစားနေရတယ်။ လေသင့်ရာဘက်ကိုနံတယ်။ အနံ့ဆိုးကြောင့် နှာခေါင်းနာတယ်။ လည်ပင်းခြောက်တယ်။ ချောင်းဆိုးတယ်။ ခေါင်းကိုက် ခေါင်းမူးကြတဲ့အတွက် တိုင် ကြားခဲ့တယ်။ သူတို့လာစစ်ဆေးတော့ ဆိုး ရွားတဲ့ အနံ့မရဘူးလို့ပြောတယ်။ ကျွန်တော် တို့အနေနဲ့ကတော့ ဒီခနောက်စိမ်းစက်ရုံ တွေ ဒီစက်မှုဇုန်က ပြောင်းရွှေ့စေချင်တယ်။ လုံးဝပိတ်သိမ်းသင့်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ ကန့်ကွက်ပါတယ်”ဟု ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲ ခေါင်းဆောင် အထည်ချုပ်စက်ရုံပိုင်ရှင် ဦးမင်းဇော်နိုင်ဦးက ပြောကြားသည်။ မော်လမြိုင်စက်မှုဇုန်တွင် လည်ပတ်လျက်ရှိသော ခနောက်စိမ်းစက်ရုံများ၏ အနံ့ဆိုးများကို မခံစားနိုင်၍ဟုဆိုကာ ဒေ သခံပြည်သူများက လက်မှတ်ရေးထိုး၍ မွန်ပြည်နယ်အစိုးရထံ တိုင်ကြားခဲ့သော်လည်း အရေးယူဆောင်ရွက်ပေးခြင်း တစ် စုံတစ်ရာ မရှိသည့်အတွက် ယခုကဲ့သို့ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
”စက်ရုံနဲ့ပတ်သက်ပြီး အနံ့ဆိုးထွက်တယ်။ ရောဂါဖြစ်တယ်ဆိုရင် စက်ရုံကိုအ ချိန်မရွေး ဖုန်းဆက်ဖို့ စက်ရုံရှေ့မှာ ကြေ ညာထားတယ်။ အနံ့ဆိုးမထွက်အောင် သေချာလုပ်ထားပါတယ်။ အစိုးရဘက်က ညွှန်ကြားထားတာတွေကိုလည်းလုပ်နေပါတယ်။ အားလုံးပြီးသွားရင် ပြည်သူလူထုကို ချပြ ပြီး ရှင်းလင်းပွဲလုပ်ပါမယ်”ဟု မြန်မာရှင်းရှင်း ခနောက်စိမ်းစက်ရုံမှ အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ ဒေါ်ရတနာလင်းအောင်က ပြောသည်။ အဆိုပါဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲတွင် ဒေသခံပြည်သူ ၂ဝဝ ကျော်တို့က မော်လမြိုင် စက်မှုဇုန်ရပ် မော်လမြိုင်-ဘားအံသွား ကားလမ်း ရွှေမြို့တော် (၇)လမ်းထိပ်တွင် လူစု ကြပြီး မော်လမြိုင်-ဘားအံကားလမ်း အ တိုင်း ရွှေမြို့တော်(၁)လမ်း တော်ဝင်နန်း စားသောက်ဆိုင်ရှေ့အထိ ငြိမ်းချမ်းစွာ လမ်းလျှောက်ပြီး ကြွေးကြော်သံများကို ကြေံးကြော်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ကြသည်။
”ခနောက်စိမ်းစက်ရုံနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စက်ရုံတွေက ထွက်လာတဲ့ ဆာလ်ဖာဒိုင် အောက်ဆိုဒ် လျှော့ချဖို့၊ မီးခိုးခေါင်းတိုင်တပ်ပြီး မြှင့်တင်ခြင်းစတဲ့ ညွှန်ကြားချက် တွေကို ပြည်နယ်အစိုးရက ညွှန်ကြားထားတယ်။ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း မဆောင်ရွက်ဘူးဆိုရင် ဥပဒေအရ အရေးယူသွားပါမယ်”ဟု ဇူလိုင် ၁ဝ ရက်တွင် ကျင်းပသည့် မွန်ပြည်နယ်အစိုးရ၏ ဒုတိယတစ် နှစ်တာကာလအတွင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမင်းကြည်ဝင်းက ပြောကြားသည်။ မော်လမြိုင်စက်မှုဇုန်တွင် ယခင်က ခနောက်စိမ်းစက်ရုံ ခြောက်ရုံရှိသော်လည်း ယခုအခါ ခနောက်စိမ်း သန့်စင် စက်ရုံ နှစ်ရုံကိုသာ ပြည်နယ်အစိုးရက စမ်းသပ်လည်ပတ်ခွင့် ပြုထားကြောင်း သိရသည်။